» के कारणले हुन्छ मानिसको सबैभन्दा बढी मृत्यु ?
के कारणले हुन्छ मानिसको सबैभन्दा बढी मृत्यु ?
१५ भाद्र २०७६, आईतवार ०६:४७
केही दशक अघिको तुलनामा मानिसहरु अहिले धेरै समय बाँचिरहेका छन् । सन् १९५० मा मात्र विश्वव्यापी औसत आयु ४६ वर्ष थियो भने २०१५ मा ७१ भन्दा माथि पुगिसकेको छ । केही राष्ट्रहरुमा रोग, माहामारी र अप्रत्याशित घटनाका कारण सो नतिजा प्राप्त गर्न सहज थिएन । तर पनि आतङ्क, युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कारणले विश्वका केबल ०.५ प्रतिशत मानिसले मात्र ज्यान गुमाएका छन् ।
यसरी रोकथाम गर्न सकिने कारकहरु नै अधिकांश मृत्युको कारण बन्ने गरेको पाइएको छ । विशेषगरी युवाहरुको असामयिक मृत्यु पछाडिका कारणहरु समयसँगै परिवर्तन भइरहेको पाइएको हो । २०१७ मा मात्र विश्वभरबाट ५ करोड ६० लाख मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क रहेको छ जुन १९९० भन्दा १ करोड धेरै हो ।
यसरी विश्वव्यापी जनसङ्ख्या वृद्धि हुने क्रममा मानिसहरुको औसत आयु बढिरहेको छ तापनि ७० प्रतिशत मानिसहरु रोकथाम गर्न सकिने गैर–संक्रमक र दिर्घकालीन रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । यी रोगहरु एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दैन र विस्तारै गति लिने गर्दछ । यसरी विशेषगरी मुटु सम्बन्धी रोगले विश्वमै सबैभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिने गरेको पाइएको छ । विश्वमा ३२.३ प्रतिशत मृत्युको कारण मुटु सम्बन्धी रोग रहेको छ, अर्थात यसले तीन मध्ये एकको ज्यान लिइरहेको छ ।